Mipoitra ny teknolojia vaovao sy ny paikadim-pitantanana vaovao hanatsarana sy hampivoarana ireo rafitra fitsaboana rano maloto. Ohatra maromaro no voalaza etsy ambany.
Fanatsarana ny rafitra septika hampitomboana ny fahafaha-manala ny otrikaina effluent alohan'ny famoahana dia paikady miseho ho an'ny rafitra fitsaboana ny rano maloto eto an-toerana (OWTS) any amin'ny faritra mora tohanan'ny eutrofication. Mba hampihenana ny famoahana otrikaina dia mihombo ny teknolojia vaovao ary takiana amin'ny toerana sasany aza.
jereo ny fanadihadiana tranga avy any Long Island, New York mamaritra ny ezaka hanoloana ny rafitra septika taloha amin'ny rafitra mampihena azota amin'ny tanam-bary madiodio izay afaka manakana ny 95% ny azota amin'ny rano maloto tsy hiditra amin'ny rano ary mamela ny rano anaty rano hamerina hody.
Ny fanarenana loharanom-pahalalana dia manondro ny fisamborana sy ny fampiasana ny rano ary ny solida avy amin'ny fako. Ny famerenana amin'ny laoniny ny loharanon-karena dia mahazo vahana ho vahaolana ho an'ny OWTS kely sy ny zava-maniry lehibe sy afovoany. Ny paikady sasany amin'ny fanarenana loharano dia:
Microfiltration, mifamadika ny osmosis, ary UV (nampiasain'i Rafitra famenoana rano anaty rano any amin'ny County County Orange County, ho an'ny rano fisotro any Los Angeles, Etazonia)
Tsy ny tsy fahampian'ny fahadiovana no antony fampiharana paikady fanarenana loharano. Ny rafi-pitsaboana efa tonta sy ny otrikaina sisa tavela ary ireo loto vao misondrotra dia mampidi-doza ihany koa amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny ranomasina. ref Ankoatr'izay, ny loharanom-pahalalana azo avy amin'ny fako maloto dia mety ho sarobidy, manomboka amin'ny rano mangatsiaka ka hatramin'ny metaly sy ny otrikaina (ohatra ny phosforus). Raha vita tsara, ny famerenana ny loharanom-pahalalana dia afaka mamorona lanja amin'ny fako ary mandray anjara amin'ny rafitra loop mihidy tanteraka amin'ny alàlan'ny famokarana herinaratra, rano, ary angovo hafanana ilaina amin'ny fitsaboana, toa ny ohatra nomen'ny Janicki Omniprocessor (jereo ny fanazavana eto ambany). Ity teknolojia ity dia afaka manatsara na manolo ny rafitra fitsaboana tsy ampy.
Loharano: SOIL (Fiainana maharitra iaraha-miaina organika)
Ny hevitra momba ny fampiasana ny fizotran'ny tontolo iainana amin'ny fitsaboana rano maloto dia tsy vaovao, fa ny fanaovana izany soa aman-tsara eo am-panaovana fidiovana ho an'ireo tsy manana fidirana dia nanolotra vahaolana amin'ny fandotoana sy ny fikaohon-tany any Haiti. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSOIL (Fiainana maharitra iaraha-miaina voajanahary) dia ONG manome fanadiovana miorina amin'ny kaontenera. Mampiasa trano fidiovana fanodinana ny mony izy ireo mba hanokanana ireo fako mivaingana ho fanangonana isan-kerinandro ary avy eo hitondra ny fako any amin'ny toerana fanaovana zezika hanaovana fitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fanjonoana, ny fako dia arakaraky ny fenitra fariparitan'ny World Health Organization ary zezika efa vita no amidy amin'ny tantsaha hampitombo ny vokatra.
Manohana ny Bill & Melinda Gates Foundation, ny Omni Processor dia mpisolo toerana ho an'ireo WWTP marobe manompo tanàna erak'izao tontolo izao. Io teknolojia io dia mamadika ny fako amin'ny olona ho etona sy lavenona, izay ampiasaina hampandeha ny asan'ny zavamaniry. Ny rano velona dia alaina ary tsaboina raha azo ampiasaina indray. Na dia prototype aza any Dakar, Senegal, ny rafitra dia mihevitra ireo singa amin'ny fako olombelona ho loharanon-karena ary mampiseho ny mety hampihenana ny vidin'ny asa sy ny fidiran'ny loharanon-karena voajanahary. Jereo ny horonan-tsary momba ny famadihana ny fako ho amin'ny harena.
Ny fitantanana ny rano maloto matetika dia mahatadidy fotodrafitr'asa volondavenona: fantsom-pitrandrahana simenitra sy tanky fitahirizana ambanin'ny tany. Fotodrafitrasa voajanahary (maintso) ary vahaolana voajanahary (NBS) manolotra fiarovana fanampiny amin'ny fiantraikan'ny rano maloto, misambotra tsara ny rano maloto sy ny rano ambanin'ny tany alohan'ny hamoahana azy any amin'ny ranomasina. Ny fizotran'ny fitsaboana voajanahary, ao anatin'izany ny faharetan'ny rano maloto amin'ny asan'ny mikraoba, ny fisondrotan'ny zavamaniry ary ny oxygenation, dia mampiroborobo ny fanesorana ireo otrikaina sy ireo otrikaretina, ary koa ny fitrohana ireo singa maloto hafa manimba. ref Tsindrio ny sary etsy ambany raha hijery ny fotoana mety sy tombontsoa azo avy amin'ny NBS.
Fahafahana sy tombontsoa azo avy amin'ny vahaolana voajanahary. Loharano: Rano IUCN
Betsaka ny ohatra amin'ny ezaky ny NBS, ao anatin'izany Ridge mankany amin'ny fihenan'ny fandotoana ny vatohara any Samoa Amerikanina amin'ny fampiasana biolojika sy bozaka vetiver ho an'ny bioretention sy fifehezana ny fikaohon-tany mba hanesorana ireo otrikaina. Ohatra hafa koa ny tany mando vita, ny bioswales, ny arina arina, ny koban-kazo algum, ny dobo honenana ary ny faritra buffer riparian. Ny tsikera momba ny vahaolana mifototra amin'ny natiora (NBS) dia ny mety tsy hanomezana fitsaboana sahaza azy ireo sy fanesorana otrikaretina samirery. Na izany aza, ampiarahana amin'ny fitsaboana fanampiny sy ny fifampiraharahana maharitra amin'ny oxygen sy microbes, io fanamby io dia azo resena ary ny NBS dia mety hanome tetika mahomby hanatsarana ny fomba fitsaboana hafa. Zahao ity fandalinana tranga avy any Guánica Bay, Puerto Rico izay nananganana fotodrafitrasa maitso hanomezana fitsaboana fanampiny ny famoahana ny tank septic, manatsara ny fanesorana ny loto ary mampihena be ny rano maloto miditra amin'ny bay.
Ny tsy fitovizan'ny lalàna mifehy, eo amin'ny fiaraha-monina sy ny tanàna, ny fanjakana ary ny firenena dia manome fanamby sarotra amin'ny fitantanana rano maloto. Na izany aza, ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny fametrahana tokonam-baravarana maloto azo avy amin'ny rano maloto dia mitana ny fandrefesana ireo hetsika maloto ary mandrisika ny valiny sy ny ezaka fisorohana. Ny ankamaroan'ny ohatra amin'ny fari-pitsaboana efa misy na ny lalàna mifehy ny rano dia avy amin'ny faritra mafana, fa na dia any amin'ireo faritra tsy misy politika manokana momba ny rano aza dia azo ampifanarahana amin'ny paikady hanatsara ny fandrefesana ny fandotoana misy, hampahafantatra ny fidirana an-tsehatra ary hanampiana ny fanaraha-maso amin'ny ho avy. Jereo ny pejy 22-28 amin'ny Torolàlana ho an'ny mpitsabo iray amin'ny fandotoana rano maloto amin'ny ranomasina hianarana bebe kokoa momba ny rafitra efa misy eo amin'ny faritra sy ny firenena, ary koa ny sokajy samihafa handinihana ireo fitsipika sy kaody mifandraika amin'izany.
Ny fikambanan'ny faritra dia mpiara-miombon'antoka lehibe hampifandray ireo mpitantana amin'ny mpandrindra sy ny fitaovana. Fikambanana toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy rano maloto any Karaiba, ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy rano maloto Pasifika, ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy fako Pasifika dia loharanom-pahalalana sarobidy ho an'ireo mpitantana mitady hitety ireo fepetra takian'ny lalàna mifandraika amin'izy ireo sy hiditra amin'ny angona, fitaovana ary loharano hafa.
Fitaovana maro no napetraky ny US EPA hametrahana ambaratonga voaloto ho an'ny rano sy fiainana anaty rano. Fitaovana tokonam-baravarana ampiasaina matetika dia enta-mavesatra isan'andro (TMDL) farafahakeliny, izay mametra ny habetsahan'ny loto manokana avela hiditra ao anaty rano. Io dia mandaitra indrindra amin'ireo loto maloto amin'ny rano maloto izay nalaina avy loharanom-baovao tsy fantatra. Ny TMDL dia miahiahy momba ny habetsahan'ny loto miditra amin'ny rano fa tsy ny loharano. Ny vitsivitsy amin'ireo misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitaovana EPA fanampiny maro ampidiro ny angon-drakitra momba ny otrikaina ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNPDAT), programa fanaingoana kalitaon'ny rano ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanenitra), ary fitaovana diagnostika ho an'ny fahasembanana biolojika ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCADDIS).
Ny torolàlana aostralianina momba ny rafitry ny tatatra, ny fitantanana effluent dia manaiky fa ilaina ny mandinika ireo masontsivana momba ny tontolo iainana alohan'ny fivoahan'ny rano. Na dia voafaritra eo an-toerana aza ny fari-pitsaboana ny rano maloto rano maloto nidina tany amin'ny rano amoron-dranomasina, ny governemanta dia manentana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano alohan'ny sy aorinan'ny fivoahana, ny fitsaboana faharoa hanena ny otrikaretina sy ny famonoana otrikaretina. Ny bay sy ny estuaries dia ekena fa marefo amin'ny fandotoana noho ny fihenan'ny fihenan-tsasatra ary mitaky fitsaboana faran'izay faharoa (farafaharatsiny) ary fanesorana otrikaina fanampiny. ref Ny sarintany National Outfall Database dia nanara-maso (hatramin'ny taona 2019) ny habetsaky ny fivoahana any ivelany manerana an'i Aostralia ary ny tatitra momba ny isan'ny mponina, karazana fitsaboana ary ambaratonga fandotoana isan-karazany. Ny paikadim-pitantanana rano maloto any Aostralia dia miha mifanaraka amin'ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina, ohatra nasehon'i misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanavaozana ny zavamaniry fanadiovana rano maloto ny rano madio any Cairnsmanokatra fisie PDF .
Ny tabilao etsy ambany dia manolotra fiheverana vitsivitsy hitarihana ny fanapaha-kevitra amin'ny rafitra mifototra amin'ny effluent, fitsipika ary ny tontolo iainana mandray. Tsy ampy ireo fitaovana izay miantoka ny fepetra ara-tsosialy, ara-pahasalamana ary ny tontolo iainana amin'ny famaritana ny fanelanelanana amin'ny fanadiovana sahaza indrindra. Rehefa novolavolaina ny fitaovana ho avy, zava-dehibe ny fampidirana ny sain'ny mpitsabo an-dranomasina amin'ny ambaratonga fitsaboana sy ny teknolojia mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny ranomasina.
Ny amoron-dranomasina Massachusetts dia niatrika fanamby enta-mavesatra misy otrikaina mifandraika amin'ny fahalotoan'ny rano maloto nandritra ny taona maro. Ho valin'izay, ny Kaomisiona Cape Cod dia nanangana tranonkala iray mifandraika amin'ny teknolojia fanadiovana, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTeknolojia Matrix. Ity fitaovana ity dia manome ny antsipiriany ireo toetra sy kileman'ireo teknolojia isan-karazany mahatonga azy ireo ho mifanaraka amin'ny toe-javatra samihafa. Fanamafisana manokana ny fanesorana ny otrikaina, fanarenana amoron-dranomasina, ary ny famerenana amin'ny laoniny dia mampiseho ny maha-zava-dehibe an'ity tranonkala ity ho an'ireo mpampiasa ranomasina. Ny fikitihana ireo teknolojia ireo dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny vahaolana misy ary mety mifanaraka indrindra amin'ny toe-javatra iray.
Ny fanadiovana dia azo tanterahina amin'ny fomba maro, mitaky loharanom-pahalalana marobe ary manome fahombiazana isan-karazany. Ny Foundation Bill & Melinda Gates dia nanao laharam-pahamehana ny fanavaozana hanatsarana ny teknolojia fanadiovana ary hanome vola isan-taona misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAvereno jerena ny fanambin'ny Toilet mangataka hevitra sy manohana ny fampandrosoana ny rafitra fidiovana maoderina izay mampihena ny rano, ny herinaratra ary ny fidiran'ny vola. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarohana Vahaolana RARE's 2020 mifantoka amin'ny paikady fanovana fitondran-tena hampihenana ny fahalotoan'ny rano. Ny fanafainganana ny fahalianana amin'ny fahadiovana ho takiana amin'ny fitandroana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana dia hanentana hatrany ny hevitra vaovao.
Ny fahafaha-manao toa ireny dia manondro ny toetra mampiavaka ny fahalotoan'ny rano maloto. Na dia tena ilaina aza ny paikady teknolojia, fitsipika ary fitantanana, ny vahaolana maharitra dia mitaky fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro. Ilaina tokoa ny fandraisana anjaran'ny mpitantana an-dranomasina amin'ity ezaka ity amin'ny fiarovana ny harenan'ny ranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanamby amin'ny rano an-tanàn-dehibe
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTatitra RTI momba ny fahafahan'ny teknolojia manatsara ny fanesorana ny otrikaina amin'ny fako olombelonamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Fikarohana momba ny rano
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFidiovana maharitra